LR1-D Relay bufee agba agba
Mgbakwụnye ọkụ ọkụ LR1-D usoro dabara adaba maka nchekwa ọkụ na sekit nwere Ac50 ma ọ bụ 60Hz, voltago ruo 660v, ntụ ọka ruo 45KW ma ọ bụ mfu. Ọ nwere mgbakwunye dị iche iche yana ọrụ nkwụghachi ụgwọ dị elu. Enwere ike idobe ya na onye na -akpọtụrụ yana enwere ike idozi ya n'adabereghị. Emepụtara ngwaahịa a dịka IEC 60947-4 si kwuo.
JR28N (LRD) 0.1-140A Relay overload overlay
Enwere ike iji usoro relay overlay relay a na sekit nke 50Hz kr60Hz, akara mkpuchi mkpuchi 660V, gosiri 0.1-140A dị ugbu a maka ichebe nkwụsị oge mgbe igwe eletriki na-ebupu ya.
The ọsọ agba anọ nwere dị iche iche usoro na okpomọkụ ụgwọ & nwere ike nkwụnye na CJX2-D usoro AC contactor. Ọ bụ agba agba ọkụ kacha dị elu na nineties n'ime ụwa. Ngwaahịa ahụ na-agbaso IEC 60947-4
LR9-F Relay overlay Relay
3UA relay relay na -ebu ibu
3UA relay relay dabara maka AC50Hz kr 60Hz, voltaji ruo 660 ~- 1000V yana ugbu a ruo 630A. General AC moto nke ogologo oge ma ọ bụ kwụsị ọrụ, nkwụghachi ụgwọ okpomọkụ. na ngosi njem. Ọ nwere ike ịlaghachi azụ na akpaghị aka. Enwere ike idozi ya na contactor ọnụ. A ga -edozikwa ya n'adabereghị.
DZ116 (MS 116) 0.1A ruo 100A mmalite moto
DZ116 (MS 116) onye na -ebido moto bụ atụmatụ nchedo moto nwere ntụkwasị obi na ọnụ ahịa. Ọ nwere a dịgasị iche iche nke ngwa. A na -ejikarị ya na injin nnyefe na ihe ọkụkụ, sistemụ ụlọ ọrụ, sistemụ eriri, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụlọ ọrụ ọgwụ, gụnyere usoro nrụpụta akpaaka (dịka sistemụ ikuku oyi), ụlọ ọrụ nchekwa gburugburu ebe obibi, ụlọ ọrụ ike, nsacha mmiri na ọgwụgwọ nsị mmiri, ụlọ ọrụ ngwaọrụ igwe. wdg. gosiri ọnụego ugbu a site na 0.1A ruo 100A. Nnukwu arụ ọrụ na ntụkwasị obi karịrị akarị, sekit dị mkpụmkpụ, agbaji agbaji na n'okpuru nchedo volta nke moto na sekit.
3p 4p 16 ~ 1250A MCCB na -agbanwe agbanwe/ihe mkpuchi sekit kpụrụ akpụ
Anyị bụ nnukwu onye nrụpụta ngwa eletriki eletrik dị ala, ngwa USB, ngwa eletriki.
JVM2 Breaker dabara na AC 50Hz, 250/440V sekit nwere oke nchekwa na nchekwa mgbapụta ụwa. A na -ahazi ọnụego egosipụtara site na 25A ruo 1600A. Onye ọrụ nwere ike họrọ oge kwesịrị ekwesị maka nchedo ka mma karịa oke ibu na obere elekere. Ngwaahịa ahụ na -akwado NFC 61450.
Volta insuiating gosiri: 750v
Voltage arụ ọrụ gosiri: 690 na n'okpuru
Ike mgbawa dị mkpụmkpụ: 25KA ~ 150KA
Servies na -emebi ikike sekit dị mkpirikpi: 25KA ~ 150KA
Onye na -akpọ Auxiliapy
A na-arụnye usoro njikọ ihe inyeaka a n'elu ngagharị njikwa LA1-D ma ọ bụ onye na-akpọtụrụ LC1-D. Eji ya gbasawanye njikọ nke isi kọntaktị kọntaktị. N'ihi ọrụ ịkpọtụrụ esemokwu esemokwu, ngwaahịa a nwere ike ihicha onwe ya, na -ahụ maka ntụkwasị obi nke sekit ahụ.
Ngbasa oge igbu oge LA2-D dabara maka onye na-akpọ LC1-D AC na otu kọntaktị inyeaka LA1-D, gbakọtara n'ime mmalite LC3-D star-delta decompression Starter, ejiri maka mmalite moto.
Iji nye 1p fuse base AD 22 × 58 na fuse de ụdị 60A 100A
Otu ngwugwu nha:
Akụkụ: 61X23X44 cm
Single ibu ibu:
PG JVM8 usoro mmegharị ihe na-agbanwe agbanwe ugbu a dabara adaba maka AC 50/60Hz, 250/440V circuit, na-egbochi ibubiga oke ókè, obere okirikiri wdg. echekwara ugbu a maka oke nchekwa nwere ike idozi.
JVM 5 (EZC) ụdị okirikiri sekit
JVM5MCCB bụ ihe ngwọta dị mfe na enweghị njedebe nke nwere ike gboo mkpa nchekwa obere ọkụ.
Onye na -emebi ihe sekit nwere kọmpat na ịdị mma a pụrụ ịdabere na ya, nke na -eme ka ikike nkewa dị elu dị mma. Enwere ike ịhụ site na imewe ya na ihe riveting na sistemụ arụ ọrụ ga -adakọrịrị dabere na ngwaahịa dị na imewe ahụ; akụkụ nke ọ bụla ga -enwerịrị ọ bụghị naanị na -agbakọ nha ya, kamakwa tụlee njikọta ọnụ n'etiti ha, iji mee ka mkpokọta ahụ zute ụkpụrụ nhazi. Enwere ike ịghọta ya site na nyocha mmezi na njiri mara ngwa ngwa na sistemụ elektrọnik nwere njikọ chiri anya na sistemụ arụmọrụ. Mgbe enwetara ụkpụrụ nhazigharị site na nyocha usoro, a ga -achọ nkwenye siri ike iji mezuo ụkpụrụ ngwaahịa; ndọtị nke usoro ọkụ ọkụ eletrik ngụkọ oge Ọ dịkwa mkpa ịnweta uru njem oge dabere na nchikota nke ọnụ ahịa gbakọrọ na ọnụ ahịa.
DZ116 (MS116) Malite moto
Onye na-ebido moto DZ bụ mmemme nchedo moto nwere ntụkwasị obi na ịchekwa ego.
Ọ nwere a dịgasị iche iche nke ngwa. A na -ejikarị ya na injinia na ụlọ nrụpụta, sistemụ ụlọ ọrụ, sistemụ eriri ebu, ụlọ ọrụ kemịkalụ, gụnyere ọgwụgwọ usoro, ụlọ ọrụ ọgwụ, nrụpụta ụlọ (dị ka sistemụ ikuku oyi), ụlọ ọrụ nchekwa gburugburu ebe obibi, ụlọ ọrụ ike, nsacha mmiri na ọgwụgwọ nsị, ụlọ ọrụ ngwaọrụ igwe. , wdg Ngosipụta dị ugbu a sitere na 0.1A ruo 100A. Ọ nwere ike rụọ ọrụ nke ukwuu na ntụkwasị obi karịrị akarị, sekit dị mkpụmkpụ, ọdịda ọdịda na nchedo n'okpuru maka motọ na sekit.
LR2-D Relay overlay Relay 0.1 ~ 93A
Enwere ike iji usoro relay overlay relay a na sekit nke 50Hz kr 60Hz, voltaji mkpuchi 660V, gosiri 0.1-9sA dị ugbu a maka ichebe bresk oge mgbe igwe eletriki na-ebupu ya. The ọsọ agba anọ nwere dị iche iche usoro na okpomọkụ ụgwọ & nwere ike nkwụnye inLC1-D usoro AC contactor. Ọ bụ agba agba ọkụ kacha dị elu na nineties n'ime ụwa. Ngwaahịa ahụ na-agbaso IEC60947-4.